Guddiga Doorashada Kenya : Waan baari doonaa in la jabsaday habka doorashada | Saxil News Network
Guddiga Doorashada Kenya : Waan baari doonaa in la jabsaday habka doorashada
Guddoomiyaha guddiga doorashada Kenya Wafula Chebukati oo shir jaraa’id ka hadlay ayaa sheegey in natiijada kama dambeysta ah lagu shaacin doono muddo 7 maalmood ah.
Waxa uu sheegey in natiijooyinka hadda lasoo gudbiyey aysan ahayn kuwa rasmi ah, kuwa rasmigana ay yihiin kuwa ku qoran foomamka gacanta ku qoran ee laga soo gudbin doono goobaha codka laga dhiibtey.
Mar wax laga weeydiiyey eedeynta hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ee ah in la jabsaday habka electaroonika ee guddiga, kadibna lagu shubtey codadka ayaa waxa uu yiri “Waan baari doonaa sheegashaadaasi, balse hadda waxbo kama oran karo”.
Wasiirka amniga oo hadlay
Image captionFred Matiang’I wasiirka amniga gudaha Kenya
Wasiirka amniga guddaha Fred Matiang’I ayaa sheegey in aysan wali helin wax xog ah oo la xiriirta rabshado ka dhashay doorashada, balse ay xaaladda u kuurgalayaan.
Wuxuu intaasi ku daray in laga yaabo in ay xanibaad ku sameeyaan isticmaalka baraha bulshada oo la aaminsanyahay in ay yihiin meelaha laga huriyo rabshadaha.
Wariye BBC-da ka tirsan oo ku sugan magaalada Kisumu ayaa soo tabiyey in uu arkay boqolaal qof oo muhaadaraad halkaasi ka dhigey, kuwaasi oo ku dhawaaqayay “Raila la’aantiis, nabad ma jirto”, balse markii dambe ay booliiska kala eryeen.
Mar sii horeysey musharaxa isbahaysiga NASA Raila Odinga ayaa diidey natiijada horudhaca ah ee muujineysa in Uhuru Kenya uu ku horeeyo 54% codadka oo la tiriyey 91% boqolkiiba.
Musharaxa madaxwaynanimada ee mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa ku gacan sayray oo diiday natiijooyiinka hordhaca ah oo muujinaya in si wayn uu ugu horeeyo, madaxwaayne Uhuru Kenyatta.
Mr Odinga ayaa saxaafada u sheegay in natiijada ka soo baxaysa doorashada ay tahay”mid been abuur ah”,sababtoo ah buu yiri lama keenin dikumiintiyo cadaynaya natiijada.
Guddiga doorashada Kenya ayaa waxa ay sheegeen in boqolkiiba 91 Mr Kenyatta uu ku hogaminayo 54.5 boqolkiiba, halka Mr Odinga uu haysto boqolkiiba 44.6.
“Waa khiyaali ,waa been abuur,”ayuu ku nuuxnuuxsaday Mr Odinga.
Sida weyn ee loogu soo baxay codbixinta doorashada Kenya ayaa ah mid muujinaysa”in dimuqraadiyada Kenya ay qaangaadhay”, waxaa sidaasi sheegay afhayeenka dowlada Kenya,Eric Kiraithe.
“Safafka waxay ahaayeen kuwa la yaab leh ,xaqiiqadii Kenyanka aad ayay u soo baxeen si ay u codeeyaan,”.ayuu yiri Kiraithe.
Madaxweynaha oo ku baaqay doorasho nabdoon
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyata ayaa ku baaqay midnimo, isaga oo sheegay in uu aqbali doono natiijada, kuwa ay is hayaanna wuxuu ugu baaqay in ay sidaas oo kale sameeyaan. Wuxuu sheegay in Kenyanku ay “horay u socdaan iyaga oo hal dal ah”.
Safafka dhaadheer ayaa subixii horeba samaysmay, waxaana la soo sheegay in ay dhacday is buurasho aan badnayn.
Kenyatta iyo ninka ay is hayaan ee Raila Odinga, ayaa loo arkaa in ay aad isugu dhaw yihiin.